HGH Malaysia | Ebe ịzụta hormone na-amụba na Malaysia na Kuala Lumpur
HGH Malaysia | Ebee ka ịzụta hormone growth na Malaysia na Kuala Lumpur?
100% ngwaahịa dị mma Ọganihu Hormone (HGH Somatotropin) na Malaysia
Anyị bụ ndị na-ekesa ndị na-eto eto nke ngwaahịa hormone na Malaysia.
Kedu ihe bụ hormone na-eto eto?
Mmiri hormone (hormone na-eto eto, STH, HGH, somatotropin) -
A na-eji hormone peptide nke ihu na-eme ka ọkpụkpụ ahụ na-eme ka ọkpụkpụ ahụ nwee ike ịmepụta ahụ.
Ogbugbu nke aru na-emetụta ya na ọkwa nke ịmalite ịmalite ịmalite.
Ná nkezi, mgbe afọ 20 ọ bụla afọ 10, ọkwa nke mmepụta ya dara site na 15%.
Mmiri hormone na-eto eto adịghị enwe esemokwu mmekọahụ. Nke ahụ bụ, ọkwa ya bụ otu maka ndị nwoke na ndị inyom.
N'agbanyeghị eziokwu bụ na iji ọgwụ ndị nwere hormone na-eto eto,
Onye WADO machibidoro ya (Òtù Ụwa Na-emegide Doping),
Na Malaysia, ngwaahịa ndị a ere. Ntu maka iji:
- Na-ere abụba
- Mmega ahụ na ihe owuwu
- Ike elu,
- Usoro mmechi nsogbu
- Ọrụ ntinye aka
- Ọrụ kachasị mma
- Ọgba aghara aghara
- Mụbaa Mmekọahụ Llibido
- Mee ka mmesi ojoo
Hormones bụ ihe ndị dị egwu dị mkpa maka ahụike gị. Na afọ, ọdịnaya nke hormone
Nke nta nke nta na-ebelata, nke na-eduga n'ịganihu nke
usoro ịka nká na ntuputa nke metụtara
Na afọ nke ọrịa. Usoro ọgwụgwọ nchịkwa nke anụ ahụ na-eme ka ahụ gị dịkwuo ogo mmiri ọgwụ mmiri ara ehi, na-eweghachi ha na ọkwa nke ahụ gị na-eto eto na nwata.
Aro maka ndi nmalite:
- Malite na 2IU kwa ụbọchị tupu ị lakpuo ụra.
- ụbọchị 5 na ụbọchị 2.
- Anyị na-agwa anyị ka anyị gbanwee oge ụtụtụ na mgbede (ọnwa ọ bụla).